“Wiilkeyga wuxuu taageeraa Real Madrid, wuxuuna u dabaal degay guushii Liverpool” – Messi – Gool FM
“Wiilkeyga wuxuu taageeraa Real Madrid, wuxuuna u dabaal degay guushii Liverpool” – Messi
(Yurub) 05 Juunyo 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ka hadlay sida uu yahay xiriirka u dhexeeya isaga iyo wiilkiisa weyn iyo kan ku xiga ee Thiago iyo Mateo, kaddib wareysi dheer uu la yeeshay TV-ga “TyC Sport” ee dalka Argantina.
Messi ayaa heysta 3 caruur ah ay u dhashay xaaskiisa Antonella Roccuzzo, kuwaasoo kala ah Thiago, Mateo iyo Ciro, Xiddiga reer Argentine ayaa sheegay inuusan marnaba joojin doonin inay ilmo u dhashaan sababa la xiriira jaceylka uu u qabo.
Hadaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa daabacay hadalada qaar ee wareysigii uu bixiyay Lionel Messi waxaana ka mid ahaa:
“Mararka qaar markii an shido TV-ga: waxaan arkaaa Mateo oo u dabaal dagaya goolasha Real Madrid, laakiin Thiago kuma farxo, balse Mateo wuxuu ku farxaa guuldaradeyda”.
Isagoo dhoola cadeenaya ayuu Lionel Messi hadalkiisa intaas ku sii daray:
“Markii aan garaacnay Liverpool kulankii lugta hore, iyo guuldaradii lugta labaad, waxaan la kulmay Mateo ciyaarta kaddib, wuxuuna igu yiri… Waxaad tahay Barcelona waxaan ahay Liverpool waan kaa guuleysanay, wuxuu fahansan yahay kubadda cagta”.
Waxaa xusid mudan in Messi uu isku diyaarinayo tartanka Copa America uu kala qeyb gali doono xulka qaranka Argentina, kaasoo lagu qaban doono bartamaha bishan Juunyo dalka Brazil.
Tartanka Kubadda cagta kulliyadaha Jaamacadda Horyaal oo lasoo gabagabeeyay… + SAWIRRO